သူမရဲ့ရင်နာစရာကိစ္စတစ်ချို့ကို စိတ်မကောင်းစွာရင်ဖွင့်လာတဲ့ ထားထက်ထက် – Bagan Thar
Grand Myanmar 2013 အလှမယ်ဆိုတာနဲ့ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အချစ်တော် ထားထက်ထက်ကိုမြင်မိမှာပါပဲနော်။သူမက ကျော်ကြားတဲ့မော်ဒယ်တစ်ယောက်အပြင် ဂျွမ်းဘားအားကစားမယ်တစ်ဦးလဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အလှမယ်ဆိုတာနဲ့ပဲ သူမရဲ့အလှတွေကို ပြောမပြလဲ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါလို့ထင်ပါတယ်။သူမရဲ့ထက်မြက်ရဲရင့်မှု့ကိုအလှတစ်ပါးလို့တင်စားမယ်ဆိုလဲမမှားပါဘူးနော်။
သူမကပရိတ်သတ်တွေရဲ့အချစ်ကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့သူလဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုတော်လှန်ရေးကာလတွေမှာလဲပြည်သူတွေနဲ့အတူ စိတ်ရောကိုယ်ပါ တတ်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦးပါ။ကိုယ်တိုင်တိုက်ထုတ်နေသူဆိုလဲဟုပါတယ်နော်။တော်လှန်ရငေအတွက်လိုအပ်တဲ့ထောက်ပံကြေးအလှူငွေကို တတ်နိုင်သလောက်အလှူခံပြီး တစ်ထောက်တစ်နေရာကနေအားဖြည့်ပေးနေတဲ့သူပါနော်။
ယခင်တလောက သူမရဲ့လူမှု့စာမျက်နှာမှာ စိတ်မကောင်စွာရင်ဖွင့်ပြောလာတဲ့စကားတစ်ချို့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူမဦးဆောင်တဲ့ အလှူငွေတွေက တော်လှန်ရေးအတွက် သုံးပုံတစ်ပုံသာရောက်တယ်လို့ ဝေဖန်ပြောဆိုခံရတာပါ။”
အလှူငွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်မ crypto currency ကို အဖွဲ့တခုရဲ့ mail နဲ့ ဖွင့်ထားလို့ သူတို့နဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး စိတ်ကြိုက်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်…. (messenger မှာမေးလို့ရပါတယ်)”လို့ သူမရဲ့အလုပ်ကို မယုံကြည်ပဲဝေဖန်နေကြတဲ့သူတွေကို ပြန်လည်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဖတ်ရှု့ပေးတဲ့ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Grand Myanmar 2013 အလွမယ္ဆိုတာနဲ႕ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕အခ်စ္ေတာ္ ထားထက္ထက္ကိုျမင္မိမွာပါပဲေနာ္။သူမက ေက်ာ္ၾကားတဲ့ေမာ္ဒယ္တစ္ေယာက္အျပင္ ဂြၽမ္းဘားအားကစားမယ္တစ္ဦးလဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။အလွမယ္ဆိုတာနဲ႕ပဲ သူမရဲ႕အလွေတြကို ေျပာမျပလဲ သိၿပီးသားျဖစ္မွာပါလို႔ထင္ပါတယ္။သူမရဲ႕ထက္ျမက္ရဲရင့္မႈ႕ကိုအလွတစ္ပါးလို႔တင္စားမယ္ဆိုလဲမမွားပါဘူး။
သူမကပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕အခ်စ္ကိုအခိုင္အမာရရွိထားတဲ့သူလဲျဖစ္ပါတယ္။ယခုေတာ္လွန္ေရးကာလေတြမွာလဲျပည္သူေတြနဲ႕အတူ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ တတ္ႂကြစြာပါဝင္ခဲ့သူတစ္ဦးပါ။ကိုယ္တိုင္တိုက္ထုတ္ေနသူဆိုလဲဟုပါတယ္ေနာ္။
ယခင္တေလာက သူမရဲ႕လူမႈ႕စာမ်က္ႏွာမွာ စိတ္မေကာင္စြာရင္ဖြင့္ေျပာလာတဲ့စကားတစ္ခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။သူမဦးေဆာင္တဲ့ အလႉေငြေတြက ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ သုံးပုံတစ္ပုံသာေရာက္တယ္လို႔ ေဝဖန္ေျပာဆိုခံရတာပါ။”
အလႉေငြနဲ႕ ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္မ crypto currency ကို အဖြဲ႕တခုရဲ႕ mail နဲ႕ ဖြင့္ထားလို႔ သူတို႔နဲ႕ ဆက္သြယ္ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္စစ္ေဆးနိုင္ပါတယ္…. (messenger မွာေမးလို႔ရပါတယ္)”လို႔ သူမရဲ႕အလုပ္ကို မယုံၾကည္ပဲေဝဖန္ေနၾကတဲ့သူေတြကို ျပန္လည္ေျပာဆိုထားပါတယ္။ဖတ္ရႈ႕ေပးတဲ့ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးကိုလဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
သရုပ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသုကို မွတ်စလင်မျိုးရိုးပါလို့ ဆဲဆိုပြီး ဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်ကာ သွေးခွဲနေတာကိုမယုံဖို့ သတိပေးလာတဲ့ ပြည်သူတစ်ဦး